Codadka: Taageeridda dhalinyarada Afghanistan iyo haweenka inay codeeyaan - Equal Access International
Hal shay oo aan ka bartay barnaamijkan waa haddii aan rabno in aan dhisno waddankeenna oo aan caawinno dadkeenna, waa in aan ka qeyb-galno doorashooyinka oo aan doorana murashaxiintayada.
Abdullah wuxuu ka yimid Gobolka Parwan, 22 jir buu ahaa
Sanadkii 2010, EAI wuxuu bilaabay mashruuca mashruuca haweenka iyo dhalinyarada Afghanistan VOTES (Codbixiyaha, Tababarka, iyo Taageerada doorashada) ee sagaal gobol oo Afghanistan ah: Baghlan, Balkh, Kapisa, Kunar, Kunduz, Jawzjan, Nangarhar, Samangan, iyo Takhar. Mashruucu wuxuu sare u qaaday fahamka, iyo kaqeybgalka, nidaamka doorashada Wolesi Jirga ee 2010 gaar ahaan lagu bartilmaameedsanayo haweenka iyo dhalinyarada Afghanistan.
Iyadoo la hogaaminayo doorashadii Sebtember 2010, VOTES waxay biloowday olole dhinacyo badan taabanaya si loogu suurta geliyo haweenka iyo dhalinyarada Afgaanistaan ​​inay fahmaan xuquuqdooda iyo waajibaadka ka saaran inay codkooda dhiibtaan kuna dhiirigeliyaan Muwaadiniinta reer Afghanistan, gaar ahaan haweenka, inay door firfircoon ka qaataan doorashooyinka. Kaqeybgalka codbixiyaasha waxaa lagu dalacsiiyay bandhig faneedka mobilada, barnaamijyada raadiyaha ee laga sii daayo Pashto iyo Dari, Dood Wadahadalka barashada iyo Kooxaha Waxqabadka (LDAG), waxqabadka kadib ayaa fududeysay wadahadalada, barnaamijyada tababarka, iyo iskaashiga ururada bulshada rayidka ee gobolka.
Barnaamijyada Raadiyaha: Barnaamijyada raadiyaha waxaa wada ciyaaray Salam Watandar FM iyo NAWA. 32 barnaamij oo shaqsi ayaa laga sameeyay Daar iyo Pashtu. Barnaamijyada waxaa la sii daayay seddex jeer usbuucii, labada Dari iyo Pashtu labadaba gobolada waqooyiga iyo bartamaha iyaga oo hoos yimaada 22-gobol.
Dhacdooyinka: Barnaamijyadu waxay ka hadlayeen mowduucyo ay ka mid yihiin sida loo diiwaangaliyo codbixinta iyo xaqa codbixinta iyadoo la tixraacayo diinta Islaamka. Tusaale ahaan, hal dhacdo ayaa raacday Jawad, oo ahaa nin dhalinyaro ah oo u sharraxay xubin kale oo bulshada ka mid ah sida uu musharrax ugu noqday doorashooyinka, oo ay ku jiraan tafaasiisha inta qof ee saxeexan uu musharraxu u baahan yahay iyo inta ay ku kacayso. Dhacdo kale ayaa daba socota murashax kale, Daoud, asaga oo bartay sida codadka loo helo. Wuxuu bartay inay tahay inuu la wadaago fikradihiisa ku saabsan waxa uu u taagan yahay inuu saameyn ku yeesho codadka dadka iyo in iibsashada codadka dadku aysan aheyn wadada saxda ah ee lagu guuleysto doorashada.
Tiyaatarka: Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waxtarka badan ee mashruucu wuxuu ahaa kooxda Fanayee Tiyaatarka, oo ah Urur Afgaanistaan ​​ah isla markaana muddo fog bah-wadaag la ah Equal Access Afghanistan. Meelaha baadiyaha ah ee dalka, tirada badan ee dadku waa waxna qorin waxna kama qorna, waxna kama weyna waxbarashadii iyo macluumaadkoodii, aqoonna way u lahaayeen geeddi-socodka dimoqraadiyadda ama meeshii ay ka ahayd Islaamka. Dadbadan oo dadkan ka mid ah, masraxa ayaa bixiya fursado waxbarasho iyo madadaalo oo haddii kale aan la heli karin.
Barnaamijka tiyaatarka waxaa lagu qabtay meelaha ay u muuqatay in macluumaad la'aan ama macluumaad khaldan laga qabo waxbarashada madaniga oo ku saleysan jawaab-celinta inta lagu gudajiray sahankeenna qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeedkayada ee loo yaqaan 'LDAGs'. Waxa cinwaan looga dhigay "Codkeenna - Kalsoonidayada," waxqabadka ayaa dhagaystayaasha gudaha bulshada u arka inay muwaadiniintu ka fikirayaan sidii ay isbeddello wanaagsan uga sameyn lahaayeen Afgaanistaan. Sheekadu waxay sahaminaysaa muhiimadda codbixinta iyo sida xulitaanka musharraxu u saameyn karaan caafimaadka dalka. Waxay muujineysaa ahmiyada ay leedahay la shaqeynta dowlada iyo doorka ay wakiiladoodu u leeyihiin iyaga. Waxay kaloo ka hadashay welwelka ay qabaan dadka reer Afgaanistaan ​​qaarkood ee ah in doorashadu ka soo horjeeddo Islaamka, taasoo muujineysa sida labaduba aysan ugu istaagin midba midka kale. Dhamaadka ciyaarta, saadka codbixinta iyo murashaxiinta ayaa la faahfaahiyay.
"Waxaan ka baranay waxyaabo aanan u haynin wax macluumaad ah oo ku saabsan hadda oo aan u malaynayo, haddii aan doonayno, in aan ku dhisi karno waddankeenna codkeenna." - Samy oo ka socda Gobolka Parwan
Xubnaha dhagaystayaasha ayaa la gaarsiiyay waxqabadka tiyaatarka guurguura "Aaminteena, Rabitaankeena"
Qaybo ka mid ah riwaayadaha raadiyaha ayaa la soo saaray oo laga sii daayay qaran ahaan
Jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in ay la wadaageen wixii ay barteen eheladooda iyo asxaabtooda ka baxsan kooxda dhageysiga
Gobolka Kapisa, mid ka mid ah jilaayaasha, oo isu diyaarinayay inuu kaalintiisa ka ciyaaro Mullah, ayaa la hadlay laba Mullahs oo maxalliga ah kuwaas oo u sheegay inaan loo ogolayn inuu iska dhigto Mullah. Jilaaga wuxuu weydiistay Mullahs inay kusii nagaadaan waxqabadka iyo hadii ay wali dareemayaan natiijada ka dib in waxa uu sameynayay ay qalad aheyd inuu joojinayo. Labada Mullahs ee maxalliga ah ayaa daawaday waxqabadka waxayna u sheegeen intaas kadib inay runtii ku riyaaqeen oo uu noqon karo Mullah markasta.
Sida uu sheegayo Qiimaynta Mashruuca DRL VOTES, oo ay wadday Soraya Mashal Consulting, waxaa jiray guulo la taaban karo oo ay kaqeybgaleyaasha mashruucu ka heleen aqoontooda ku saabsan hannaanka doorashada. Waxay ka adkaadeen, tusaale ahaan, is fahan la’aanta ahayd in ay jirto lacag lagu isdiiwaangaliyo si ay u codeeyaan (qiimaha ayaa dhab ahaantii ahaa musharrixiinta).
Barnaamijkaan waxaan ka baranay in qof walbaa uu xaq u leeyahay inuu ka qeyb galo doorashooyinka waana in la doortaa musharraxnimadiisa, qofka taageeri kara dadkeenna oo xallin kara dhibaatooyinkooda. ”
kana yimid Gobolka Samangan (23 jir)